Firenena Mikambana tahan'ny fifanakalozana angona amin'ny 23/01/2022 08:00
Malagasy ariary ny Euro ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny. Malagasy ariary ny sandan'ny Euro amin'izao fotoana izao.
Malagasy ariary ny Euro ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary Ny Euro mitranga indray mandeha isan'andro. Ny taham-panakalozam-bola dia misy sanda iray isan'andro isan'andro arakaraka ny vokatry ny varotra eo amin'ny fifanakalozana ary natokana ho an'ny andro iray amin'ny alàlan'ny banky nasionaly. Ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana Malagasy ariary to Euro avy amin'ny angon-drakitra azo itokisana. Ity misy fanamarihana isan'andro momba ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny vola.
1 Malagasy ariary dia mitovy amin'ny 0.00022 Euro ao amin'ny banky eoropeana ankehitriny. 1 Malagasy ariary nisondrotra 0 Euro anio ao amin'ny banky eoropeana mitarika. Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana hafa dia mihoatra ny Euro araka ny tahan'ny fifanakalozana eropeana. 1 Malagasy ariary izao dia lafo 0.00022 Euro - ny tahan'ny ny banky eropeana.
Niova fo Malagasy ariary Ny Euro Malagasy ariary Ny Euro velona amin'ny fifanakalozana Forex tsena Malagasy ariary Ny Euro ny tahan'ny fifanakalozana tantara
Malagasy ariary Ny Euro Taham-panakalozana amin'izao fotoana izao 23 Janoary 2022
Ny fanovana ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana ny Malagasy ariary to Euro dia naseho an-databatra nandritra ny andro maromaro. Ampitahao ny vidin'ny fifanakalozana amin'izao fotoana izao, omaly ary andro farany hamaritana ny tahan'ny fitomboana na fianjeran'ireo vola voafidy. Ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary to Euro ho an'ny omaly, ny andro talohan'ny andro ho avy. Ny fahafantarana ny dinamika dia hanome anao fahafahana hahafantatra ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary mankany Euro ho rahampitso.
23.01.2022 0.000223 -
22.01.2022 0.000223 0.0000013933761162709 ↑
21.01.2022 0.000222 0.0000016955740509455 ↑
20.01.2022 0.00022 -0.0000011472136273101 ↓
19.01.2022 0.000221 0.0000012337837330448 ↑
Ho an'ny 10 000 Malagasy ariary dia mila mandoa vola 2.20 Euro. Ny vidin'ny 50 000 Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana dia 11 Euro. Ny vidin'ny 100 000 Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana dia 22.01 Euro. 55.02 Euro anio dia lafo ny 250 000 Malagasy ariary amin'ny taham-panakalozana. 1 Malagasy ariary dia mitovy ankehitriny amin'ny 0.00022 Euro araka ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny banky nasionaly. 1 Malagasy ariary nisondrotra 0 Euro anio araka ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny bankin'ny firenena.
4 543.57 Malagasy ariary anio dia vidin'ny 1 EUR amin'ny fifanakalozana tahan'ny. 5 Euro izao dia 22 717.86 Malagasy ariary. Ny vidin\_'ny 10 Euro ny tahan\_'ny fifanakalozana dia 45 435.72 Malagasy ariary. 25 Euro izao dia 113 589.31 Malagasy ariary. Androany, ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana dia nanohitra ny Euro. Ho an'ny 1 Malagasy ariary izao dia mila mandoa ianao ny 0.00022 Euro araka ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny banky nasionaly .